Madaxwaynaha Jabuuti o Madaxda Shirka New York ka codsaday inay tageeran rabitaankiisa | Biyoguurenews.com
Home Wararka Madaxwaynaha Jabuuti o Madaxda Shirka New York ka codsaday inay tageeran rabitaankiisa
Madaxwaynaha Jabuuti o Madaxda Shirka New York ka codsaday inay tageeran rabitaankiisa
Madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dalalka xubnaha ka ah golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ka codsaday inay dalkiisa ku taageeraan tartanka kursiga aan joogtada ahayn ee lagu matalayo Afrika.
Geelle ayaa qeyb ka mid ah khudbaddiisa uu ka jeedinayay shir madaxeedka golaha loo dhan yahay ee qaramada Midoobay kusoo qaatay sida ay Jabuuti ugu baahan tahay inay hanato kursigaas, inkastoo ay loollan adag kala kulmeyso dowadda Kenya.
“Mudane madaxweyne kulanka 74-aad ee uu golaha loo dhan yahay yeelan doono bisha June ee sanadka 2020 waxaa lagu dooran doonaa shanta dal ee xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha amniga kuwaasoo shaqeyn doona muddada u dhaxeysa 2021-ka ilaa 2022-ka. Mid ka mid ah kuraastaas waxaa loo qoondeeyay qaaradda Afrika, markanna sida ay qaaraddu isku afgaratay, waxaa kursigaas buuxin doona wadan ku yaalla bariga Afrika. Sida uu dhigayo xeerka midowga Afrika, shaki kuma jiro in Jabuuti ay ka mid tahay musharraxiinta ururka ugu matalaya tartanka kursigaas golaha amaanka, muddada 2021 ilaa 2022. Xeerka wuxuu dhigayaa in waddan kasta oo ku yaalla qaaradda Afrika, ha yaraado ama ha weynaado, waxay xuquuq siman u leeyihiin inay xubin ka noqdaan golaha amniga iyo dhammaan guddiyada kale ee Qaramada Midoobayba. Dowladda Jabuuti waxay si xushmad leh ugu baaqeysaa dhammaan dalalka xubnaha ka ah golaha inay taageeraan musharraxnimada Jabuuti ee kursiga golaha amniga”.
Hadalka Madaxweyne Geelle ayaa muujiyay sida ay Jabuuti uga go’antahay inaysan Kenya uga tanaasulin tartankaas.
Shacabka Jabuuti ayaa sidoo kale hadalka madaxweynahooda uga qancay walaac laga muujinayay in Jabuuti ay kursigaas u dhaafeyso Kenya, maadaama ay magaalada New York ku kulmeen Geelle iyo dhiggiisa dalka Kenya, Uhuru Kenyatta.
Madaxweynaha Masar Cabdifataax El-Sisi,oo ah guddoomiyaha midowga Afrika, ayaa kulansiiyay labada madaxweyne.
Hardanlka u dhaxeeya Kenya iyo Jabuuti ayaa isbuucyadii lasoo dhaafay gaaray meel qallafsan, wuxuuna khalkhal galiyay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan.
Xiisadda ayaa billaabatay ka dib markii ay Kenya 37 cod ka heshay midowga Afrika, sidaasna ay ku noqotay musharraxa kursiga golaha amniga, halka Jabuuti ay codeyntaas ka heshay 13 cod oo kaliya.
Hase yeeshee natiijadaas Jabuuti kama horistaagin inay sii wadaan dadaalka ay ugu jiraan sidii ay kursigaas ku hanan lahaayeen.
Previous articleMaxa Sababay In Cabdil qadir Jirde ka qaybgali waayo shirka xisbiga wadani e burco
Next articleMuxuu amiirka boqortooyada Ingiriiska ugu socday dhul ay miino ka buuxdo?